Weerar Askar Lagu Dilay Oo Gobalka Bakool Ka Dhacay. – Calamada.com
Weerar Askar Lagu Dilay Oo Gobalka Bakool Ka Dhacay.
calamada January 18, 2017 1 min read
Weear dhabba gal ah oo ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ka fuliyeen duleedka degmada Xudur ee xarunta gobalka Bakool waxaa lagu dilay tiro askar ah oo ka tirsan maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka.
Kamiinka ayaa loo dhigay maleeshiyaat ka tirsan dowlada kuwaasi oo qaadka maandooriyaha kasoo qaaday degmada Ceel barde kuna sii jeeday dhanka degmada Xudur ee gobalka Bakool.
Maleeshiyaatka kamiinka loo dhigay ayaa la socday gaari nooca Runeeda ah’iyadoona kamiinka uu sigaar ah kaga dhacay deegaan lagu magacaabo Maarey oo ka mid ah deegaanada dhaca wadada isku xirta degmooyinka Ceelbarde iyo Xudur.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in kamiinkaasi lagu dilay labo askar islamarkaana la qaniimeystay hubkii ay wateen labadaasi askari’waxey sidoo kale ciidamada Shabaabul Mujaahidiin gubeen gaarigii ay qaadka ku siteen maleeshiyaatka dowlada federaalka.
Previous: Taliyihii Amniga Deegaanka Leego Oo Geeriyooday.
Next: Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Dad Shacab Ah Dilay.